10 ဥရောပရှိအလှဆုံးကမ်းရိုးတန်းမြို့များ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > 10 ဥရောပရှိအလှဆုံးကမ်းရိုးတန်းမြို့များ
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 15/01/2021)
တစ်ဖက်တွင်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာနှင့်အခြားတစ်ဖက်ရှိအလှပဆုံးမြို့များနှင့်အတူ, အဆိုပါ 10 ဥရောပရှိလှပသောကမ်းရိုးတန်းမြို့များသည် အနားယူ၍ မမေ့နိုင်သောအားလပ်ရက်များအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာများဖြစ်သည်. ကမ်းပါးပေါ်တွင်အနားယူ, သမုဒ္ဒရာလှိုင်းတံပိုးကိုနားထောင်, အဆိုပါယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့ပင်လယ်ရေတက်စိမ်, သို့မဟုတ်ဆိပ်ကမ်းများနှင့်မျှော်စင်များနောက်ကွယ်မှဒဏ္discoverာရီများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း, သင်အီတလီ၏ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်တွင်သာရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အထူးအတွေ့အကြုံများဖြစ်ကြသည်, ပြင်သစ်, နှင့်အင်္ဂလန်.
1. အီတလီမှာလှပသောကမ်းရိုးတန်းမြို့: Amalfi ကမ်းခြေ
Tyrrhenian Sea of ​​Amalfi မြို့ကိုအပေါ်စီးကနေကျော်ကြားတဲ့သာယာလှပတဲ့အိမ်တွေဟာပို့စကတ်ပြားတွေပါ. ထိုကွောငျ့, Amalfi သည် Amalfi ကမ်းခြေရှိမြို့အားလုံးကိုအီတလီနိုင်ငံရှိအလှဆုံးကမ်းရိုးတန်းမြို့အဖြစ်သတ်မှတ်သည်. ဖြည့်စွက်ကာ, သင်ကဥရောပတိုက်တွင်အိပ်မက်မက်ဖွယ်အကောင်းဆုံးနွေရာသီဖြစ်သည်. ဤသည်ကမ်းပါးများဆန့်ကျင်ရေပြာမှကျေးဇူးတင်ပါသည်, ပင်လယ်ဘေးမှထွက်ခွာသွားရန်အဆင်သင့်အနေအထားကိုဖန်တီးပေးသောရောင်စုံအိမ်များ.
ထို့အပြင်, သင်ပိုမိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ဆန္ဒရှိလျှင်, ထို့နောက် Amalfi ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့် Rufolo villa, မြေထဲပင်လယ်နှင့်ဥယျာဉ်၏အံ့မခန်းဖွယ်ရာရှုခင်းများကိုဖော်ပြပေးသည်. သို့သျောလညျး, Amalfi ၏မီးမောင်းထိုးပြသည် 40 မိနစ်များ’ အချို့ Vietri Sul Mare မှ Positano သို့မောင်းပါ အများဆုံးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာအမြင်များ ကမ်းရိုးတန်း၏.
2. ပြင်သစ်တွင်အများဆုံး Charming ကမ်းရိုးတန်းမြို့: Saint-Malo
နေစဉ် Saint-Tropez နှင့် Nice ဖြစ်ကြသည်2ပြင်သစ်အတွက်လူကြိုက်များကမ်းရိုးတန်းမြို့များ၏, အင်္ဂလိပ်ရုပ်သံလိုင်းရှိ Brittany ရှိ Saint-Malo ကမ်းရိုးတန်းသည် ဝှက်ထားသောကျောက်မျက်. ဤသည် Saint-Malo ရဲ့ကမ်းခြေပေါ်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့သောကြွယ်ဝသောသမိုင်းနှင့်ပုံပြင်များမှကျေးဇူးတင်စကား. Saint-Malo ၌တည်၏, သငျသညျပင်လယ်ဓားပြ၏ကြိမ်ပြန်အချိန်ပြန်သွားပါလိမ့်မယ်, နှင့်ပြင်သစ် corsairs, တိုက်ပွဲကနေဂရန်းပြင်သစ်တိုက်ခိုက်နေခြင်းနှင့်ခုခံကာကွယ်.
ယနေ့တွင်, Saint-Malo ၏ရိုးများသည်မြို့ဟောင်းကိုလှည့်ပတ်လမ်းလျှောက်နိုင်သည့်အတွက်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်, နေဝင်ချိန်လေးစားပါတယ်, လှိုင်းများကိုကြည့်သည်. Saint-Malo ၏ကျက်သရေကိုအပြည့်အဝနားလည်သဘောပေါက်ရန်သင်သည်နေ့ချင်းညချင်းနေထိုင်ပြီး Grand Be နှင့် Petit Be တို့၏ခံတပ်များသို့လည်ပတ်သင့်သည်.
3. ဥရောပ၌လှပသောကမ်းရိုးတန်းမြို့: Lerici, အီတလီ
အီတလီ Riviera မှ Lerici မြို့အကြောင်းမကြားဖူးပါ, ဥရောပရှိအလှဆုံးကမ်းရိုးတန်းမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်. ၎င်း၏အိမ်နီးချင်း La Spezia ဆိပ်ကမ်းမြို့သည်အစဖြစ်သည် Cinque Terre သို့သင့်ခရီးစဉ်, ဒါပေမယ့် Lerici မှာသူမရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ကိုယ်ပိုင်မှော်. သငျသညျ Lerici ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် 8 La Spezia ၏အရှေ့တောင်ဘက်ကီလိုမီတာ, ခြယ်သအိမ်များနှင့်အတူ, ကောင်မလေး, ဆိပ်ကမ်း, ပင်လယ်ကိုအပေါ်စီးမှ 12 ရာစုရဲတိုက်, အံ့သြဖွယ်ရှုထောင့်, နှင့် တောင်တက်လမ်းကြောင်း ကမ်းရိုးတန်းတလျှောက်.
ထို့အပြင်, Lerici သည်အီတလီကမ်းခြေသို့သင်၏ခရီးစဉ်အတွက်အလွန်ကောင်းသောအချက်ဖြစ်သည်: သာယာလှပတဲ့ Cinque Terre, မင်္ဂလာပါ, နှင့် Portoverane. ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Pisa ကိုတစ်ရက်ခရီးတစ်ခေါက်သွားနိူင်မယ်.
4. ပြင်သစ်တွင်လှပသောကမ်းရိုးတန်းမြို့: Cassis-Marseille
ထုံးကျောက်ကမ်းပါးများ, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့ရေ, လမ်းဘေးကဖေးများမှကမ်းခြေ၏မြင်ကွင်းကျယ်အမြင်များ, Cassis အချစ်ဆုံးကမ်းရိုးတန်းမြို့ပါစေ. Cassis သည်ဥရောပရှိအမြင့်ဆုံးကမ်းရိုးတန်းကမ်းပါးကြားတွင်တည်ရှိသည်, Cap ကာနေးလ်, နှင့်အဖြူရောင်ထုံးကြောကျ Calanques. ထို့အပြင်, Cassis ၌တည်၏, သင်တို့ရှိသမျှသည်ကမ္ဘာ၏အကောင်းဆုံးကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ် – စပျစ်ဥယျာဉ်များကိုသက်သေပြ, နှင့်ခမ်းနားမြေထဲပင်လယ်.
နှင်းဆီစပျစ်ရည်တစ်ခွက်ကိုသောက်ခြင်း, တံငါသည်များကိုကြည့်သည်, ဒီမှော်ကမ်းရိုးတန်းမြို့မှာမင်းရဲ့အားလပ်ရက်အပန်းဖြေစခန်းဖြစ်လိမ့်မယ်. ဤပြင်သစ်ဖျောက်ထားသည့်ကျောက်မျက်သည်မာဆေးမှရထားစီး။ သွားသောလမ်းဖြစ်သည်, နှင့်အလုပ်များသောမြို့ကနေပြီးပြည့်စုံသောထွက်ပြေးဖို့.
ပါရီမှရထားနှင့်အတူ Marseilles ရန်
Marseilles သည်ရထားနှင့်အတူ Clermont Ferrand သို့သွားမည်
La Rochelle မှရထားနှင့်အတူပါရီ
5. ပြင်သစ်တွင် Arromanches-Les-Bains
နော်မန်၏ကမ်းတက်များအတွက်ကျော်ကြားသော, Arromanches သည်ပြင်သစ်ရှိ Normandy ဒေသရှိလှပသောကမ်းရိုးတန်းမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်. တစ်ချိန်ကဖြစ်ခဲ့သည်စစ်ရေးအချက်ဆန့်ကျင်, ဒီနေ့အတ္တလန္တိတ်ကမ်းခြေမှာမင်းကိုတွေ့နိုင်မယ့်အံ့ဖွယ်ကမ်းခြေမြို့တစ်မြို့ကိုတွေ့လိမ့်မယ်.
ထိုကွောငျ့, သငျသညျသမုဒ္ဒရာအားဖြင့်မမေ့နိုင်သောအားလပ်ရက်အဘို့အ၌ရှိကြ၏, ရေငုပ်ခြင်းနှင့်အတူ, ရွက်လှေ, ရွှေကမ်းခြေပေါ်မှာမြင်းစီးခြင်း, နှင့်နေရောင် - ရေချိုး. တိုတောင်းသောသို့မဟုတ်ရှည်လျားတနင်္ဂနွေသည်, သငျသညျ Arromanches-Les-Bains နှင့်အတူသမုဒ္ဒရာပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်’ 550 သူမြို့သား, နှင့်တွေ့ကြုံခံစား Normandy မှော်.
တစ် ဦး ကရထားနှင့်အတူ Lille မှပဲရစ်
ရထားနှင့်အတူ Brest မှရထား
ရထားနှင့်အတူ Le Havre မှ Rouen
6. Cornwall, အင်္ဂလန်နိုင်ငံ
Cornish ကမ်းရိုးတန်းအထိရှိသည် 679 ကျောက်တန်း၏ကီလိုမီတာ, ဂူ, နှင့်ကမ်းခြေ. ဤသည်ဗြိတိန်တွင်အကောင်းဆုံး surfing မြို့အဖြစ် Cornwall ရဲ့ status ကိုမှထပ်ပြောသည်. ဒါကြောင့်, အကယ်၍ သင်သည်သင်၏အားလပ်ရက်များကိုပင်လယ်ကမ်းခြေ၌ရေအားကစားလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်ရန်စီစဉ်နေပါက, Cornwall စုံလင်သည်.
ဂရိတ်ဗြိတိန်ရှိအလှဆုံးကမ်းရိုးတန်းမြို့သည်လှပသောကျွန်းဆွယ်တစ်ခုဖြစ်သည်. ထိုကွောငျ့, ဘယ်နေရာကိုပဲလှည့်ပါ, သင်ကိုယ်တိုင်အံ့သြဖွယ်ကမ်းရိုးတန်းမှာရပ်နေတွေ့ပါလိမ့်မယ်. Cornwall ရဲ့အကောင်းဆုံးသောကမ်းခြေနှင့်ကမ်းရိုးတန်း၏အကောင်းဆုံးအမြင်များသည်, သင်သည်အနောက်တောင်ကမ်းခြေလမ်းကြောင်းကိုလျှောက်နိုင်သည်.
7. ပြင်သစ်တွင် Honfleur ကမ်းရိုးတန်းမြို့
သငျသညျပြင်သစ်အတွက်အကောင်းဆုံးကမ်းရိုးတန်းမြို့ရှာနေလျှင်, ထို့နောက် Honfleur အဖြေဖြစ်ပါတယ်. Seine မြစ်နှင့်သမုဒ္ဒရာ၏အစည်းအဝေးကျင်းပရာနေရာ, မြစ် cruises, ပင်လယ်၌ရောင်ပြန်ဟပ်ရောင်စုံအိမ်များ, နှင့်ကမ်းခြေအားဖြင့်လမ်းလျှောက်, Honfleur ၏တ ဦး တည်းပါစေ 10 ဥရောပရှိအလှဆုံးကမ်းရိုးတန်းမြို့များ.
အောက်တိုဘာလသည် Honfleur ရှိ Marina နှင့်ပင်လယ်ကမ်းခြေလတ်ဆတ်သောလေထုကိုပျော်မွေ့ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်. နွေရာသီကိုနှုတ်ဆက်ပြီးနေကိုစိုစွတ်ပြီးစိုထိုင်းဆကိုရှောင်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါ, နှင့်ခရီးသွား crow ည့်လူအစုအဝေး.
တစ် ဦး ကရထားနှင့်အတူ Calais မှပဲရစ်
ရထားနှင့်အတူ Calais မှ Rouen
8. Santa Cesarea Terme အီတလီ
Santa Cesarea Terme သည် Puglia ရှိအံ့ဖွယ်ကမ်းရိုးတန်းမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်. ပင်လယ်ကိုအပေါ်စီး, သငျသညျကောင်းတဲ့ပင်လယ်ပျော်မွေ့ရလိမ့်မယ်နှင့် သင့်ရဲ့အီတလီအားလပ်ရက်အပေါ်အပူရေချိုး.
အီတလီရှိအခြားရောင်စုံကမ်းရိုးတန်းမြို့များနှင့်မတူဘဲ, Santa Cesarea ကို၎င်းမှခွဲခြားသည် အစ္စလာမ့်ဗိသုကာ. ဆိုလိုတာက, မြို့ပတ်လည်၌အဖြူအထင်ကြီး villas နှင့်မျှော်စင်များ, နှင့်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းပေါ်အပြာရောင်ပင်လယ်နှင့်အတူလုံးဝလှပသောကြည့်ရှုပါ. ဒီလှပတဲ့ကမ်းခြေမြို့ကိုသွားဖို့ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်, သငျသညျမွို့၌အသွင်ပြောင်းရဲတိုက် - ဟိုတယ်များများထဲမှတည်းခိုဖို့လုံလောက်တဲ့ကံကောင်းပေလိမ့်မည်.
ရထားနှင့်အတူ Brindisi မှ Naples
တစ် ဦး ကရထားနှင့်အတူ Fasano မှ Bari
ရထားနှင့်အတူ Fasano မှ Naples
9. Brugge (အသုံး), ဘယ်လ်ဂျီယံ
Brugge of Old Town သည်အများဆုံးထဲကတစ်ခုဖြစ်သည် ဥရောပအတွက်ချစ်စရာကောင်းဟောင်းမြို့စင်တာများ. Brugge သည်လည်းခေါင်းစဉ်တစ်ခုအနေဖြင့်ရရှိထားသည် 10 ဥရောပရှိအလှဆုံးကမ်းရိုးတန်းမြို့များ. ပင်လယ်နားကဘရူဂူတွေဟာမျက်စိကိုအတော်လေးအံ့ sight စရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်, ၎င်း၏တူးမြောင်းနှင့်အတူ, လှေ, နှင့်သာယာသောအိမ်များ.
လှပသောကမ်းရိုးတန်းနှင့်အတူ, ကအများအပြား Flemish ရှငျဘုရငျတို့ရှေးခယျြအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး, သူတို့ရဲ့အိမ်အဖြစ် Brugge. ထိုကွောငျ့, ပင်လယ်ပြင်ကိုအပေါ်စီးကနေမြင်နိုင်တဲ့ရဲတိုက်တွေနဲ့မျှော်စင်တွေအများကြီးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသင့်တယ်.
10. ဗင်းနစ်, အီတလီ
ဗင်းနစ်မြို့၏လှပသောမြို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏မြို့ကိုပိတ်ထားသည် 10 ဥရောပမှအလှဆုံးကမ်းရိုးတန်းမြို့များ. အဆိုပါဗိသုကာ, gelato, နှင့် လှေစီး ဗင်းနစ်ကိုပင်လယ်နားမှာလုံးဝအိပ်မက်မက်နေတဲ့နေရာတစ်ခု.
ဗင်းနစ်သည်ပင်လယ်ပေါ်တွင်နေထိုင်သည်, ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဥရောပအားလုံးအတွက်အန္တိမကမ်းရိုးတန်းမြို့. အီတလီ Venice ကိုးကွယ်, နှင့်ခရီးသွား too ည့်လည်းကကိုးကွယ်. လမ်းဆုံများနှင့်ကျဉ်းမြောင်းသောလမ်းများပတ်လည်တွင်သင်အံ့ time ဖွယ်ကောင်းသောအချိန်ရလိမ့်မည်.
ဒီမှာ တွင် တစ်ဦးကရထား Save, သင်၏“ ဥရောပတွင်လှပသောကမ်းရိုးတန်း ၁၀ မြို့” သို့သင်၏ခရီးကိုစီစဉ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါမည်။.
သင်၏ဘလော့ဂ်ကို“ ဥရောပတွင်အလှပဆုံးကမ်းခြေမြို့ (၁၀) ခု” ကိုသင်၏ဘလော့ဂ်ကိုတင်ချင်ပါသလား? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbeautiful-coastal-towns-europe%2F%3Flang%3Dmy ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
မင်္ဂလာပါ မင်္ဂလာပါ ကမ်းရိုးတန်း ပြင်သစ် ကမ်းခြေ eng